‘HiviSasa’, Tetikasa Fampitam-baovaon’Olompirenena Kenyana Ampiasaina Amin’Ny Tranonkalan’Ny Finday · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2016 9:14 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Swahili, Español, English, English
HiviSasa, amin'ny fiteny Swahili hoe “amin'izao fotoana izao”, dia tetikasa fampitam-baovao nomerika Kenyana mamoaka vaovao sy sary avy amin'ny olom-pirenena mpampita vaovao ary mandray vola isaky ny lahatsoratra havoaka amin'ny alalan'ny M-Pesa , izay rafitra fandoavam-bola amin'ny finday. Mahazo vola eo amin'ny 85 $ Amerikana isan-kerinandro ny olom-pirenena mpampita vaovao sasany arakarak'ilay tranonkala.
Manome loka amin'ny alalan'ny vola isan-kerinandro ho an'ireo mpanoratra izay manana lahatsoratra mahasarika mpamaky betsaka indrindra ihany koa tetikasa.
Mandrakotra fivondronana 10 ao amin'ny firenena ny tranonkala amin'izao fotoana izao : Nakuru, Kiambu, Machakos, Kisii, Nyamira, Kisumu, Uasin Gishu, Garissa, Mombasa ary Kibera.
Manazava ny filozôfiany ao amin'ny tranonkala ny HiviSasa:
Tsy misy iray minitra akory ny fisoratana anarana ho an'ny mpandray anjara ao amin'ny tranonkala , ary tsy mpanao gazety voaofana vao afaka manoratra ao amin'ny HiviSasa :
Nanome ohatra telo amin'ny tantaram-baovao tsara niseho tao an-toerana ny tranonkala ho an'ireo mpanoratra vaovao. Momba ny lehilahy Kenyana iray ny iray amin'ireo tantara, Lawrence Gekonge, izay nandevina ny vadiny tao an-dakozia nony maty izy satria nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tao ilay ramatoa. Nilaza ilay rangahy fa tokony halevina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ilay trano izy rehefa maty.
Momba ny olom-pirenena mpampita vaovao iray ny tantara faharoa, Luvanda Dickens, izay efa nahavita namoaka tsy tapaka tantara 50 mahery isan-kerinandro . Ny fahatelo indray dia momba ny kadasitra 1200 izay tsy azo tao amin'ny Rejisitry ny Fananantany.
Nanoratra tamin'ny imailaka ho an'ny Global Voices i Enoch Nyariki, tonian-dahatsoratra mpitarika ilay tetikasa fa efa namoaka tantara miisa 61.000 hatreto ny tranonkala. Nilaza izy fa iray amin'ireo fanamby lehibe atrehan'ny tetikasa ireo olom-pirenena mpampita vaovao maka tombontsoa amin'ny Akademia HiviSasa maimaimpoana natsanbgan'izy ireo hanome hery ireo mpitati-baovao amin'ny talenta fototry ny fanoratam-baovao fototra.
Teny fampidirana ao amin'ny Akademia amin'ny fiteny Sheng, fifangaroan'ny teny Swahili sy anglisy ny lahatsary YouTube eto ambany:
Natao tetikasa fitaratra tamin'ny taona 2012 niaraka tamin'ny fanohanan'ny 88mph ny tetikasa, izay mpamatsy vola ireo sampandraharaha vao hiforona, ary navoaka ofisialy tamin'ny Janoary 2014 . Ny Tambajotra Omidyar sy ny Orinasa Sahy Sedra Novastar no mpampiasa vola hafa tao amin'ny tetikasa .
Amerika Avaratra 14 ora izay